shp - Page 3 - Geofumadas
files qaabka, oo loo yaqaan .shp la quaternized qaabab gudahood technology laakiin ma ka hortagi kartid in lagu caan badan maadaama ay ahayd ArcView 3x. Tani waa sababta ay weli si weyn loo isticmaalaa, ilaa xad in ugu dhufto ee geospatial dhufto yeelatay joogtada loogu shaqeeyo. ...
kml to dxf - Shan waa shan hab oo loo dhigo isbedelkaas
Beddelashada feylasha laga soo bilaabo kml ilaa dxf waa baahi aad u caadi ah, kadib markii Google Earth caan ku noqotay. Qodobkaani wuxuu muujinayaa sida loo sameeyo bedelkaas iyadoo la adeegsanayo aalad bilaash ah.
ArcView Dgn Dwg GvSIG OS KML kml ilaa dxf GIS kala cayncayn ah SHP
Google Earth oo la qaadi karo, si loogu isticmaalo iyada oo aan lahayn xiriirka internetka
Dhawaan Google ayaa isbeddel ku sameeyay ruqsadaha, iyaga waxaa ka mid ah: 1. Bixinta sheyga la qaadi karo Tani waxaa loo dallacsiiyay ujeedooyin sida kiisaska musiibo dabiiciga ah, oo ku lug leh luminta korontada ama xiriirinta. Xaaladdan oo kale waxaa jira version ah in lagu dhajiyo disk ah USB ama mid ...
Google Earth / Maps, tabo cusub
Koorsada waxaan go'aansanay inaanu tijaabino nooca cusub ee GvSIG, inkasta oo aan weli lagu dhawaaqin xasillooni, waxaa suurtagal ah in la soo dejiyo dhismooyin kala duwan si loo arko waxa ruxruxa. Waxaan soo dejiyay 1214, inkastoo aan filayay in aan tijaabiyo farsamooyinka astaamaha ee dhibcooyinka iyo xariiqda sida xurxo ii sheegtey, sida muuqata waxaan isku dayi doonaa ...
Bixinta version 8.0.10.0 ee Manifold GIS
Noockan Manifold ayaa lagu dhawaaqay, tan iyo markii 8.0 117 uu isbaddal ku sameeyay inta badan loogu talagalay hagaajinta xawaaraha xogta. Waa in aan qiranno in ay maqleen badankooda cayayaanka oo soo sheegay in aan si aan caqli gal ah ugu qornayn codsigan, sidaas darteed ...
Markii hore waxaan aragnaa sida loo sameeyo Microstation Geographics V8, iyo bedelka ah in la soo dhoofiyo faylasha .shp. Aan aragno sida adduunka loo badalay marka la eego nooca 8.9 oo loo yaqaan Bentley Map XM. Habka loo xakameynayo waa mid aad u xoogan, marka loo eego microse-ka hadda akhristo, isbedel, tixraac tixraaca ... maaha kaliya ...
Aynu aragnay kiiska: Waxaan haystaa lakin ArcView oo ay ku jiraan awoodda tuulooyinka ee aagga qaabka qaabka, waxaanan doonayaa in aan u soo dhoofiyo Microstation Geographics. Aynu aragno sida loo sameeyo: Qaybaha wax soo dejinta ah Waxaa lagama maarmaan u ah tani inay furto mashruuc Microstation Geographics, kiiskan waxaan haystaa mid ku xiran saldhigga Xarunta Access via ODBC ...
GeoShow, oo ah Google Earth
GeoShow waa qalab xooggan oo loogu talogalay abuurista muuqaalada muuqaalka ah ee cabbirka 3 ee qaabka Google Earth, laakiin leh qaabab badan oo adag marka loo eego isdhexgalka GIS, ammaanka isticmaalaha iyo adeegga xogta. Shirkada mulkiiluhu waa Geovirtual, oo laga aasaasay Barcelona. Halkan waxaan ku soo bandhigaa ugu yaraan saddex dabeecadood oo iigu yeedhay ...
maalin wanaagsan, reading wanaagsan oo la caddeeyo ka khayr badan waxay GvSIG oo cad, in la isbarbardhigo la kala cayncayn Aan aragno sida ay u dhaqmaan, kuwaas oo laba qalab oo ah qaabab ka akhri: Project Management kala cayncayn ah GvSIG: format gvp waa Handler xogta ah, ma waxaa ku jira macluumaadka gudaha. Sidoo kale ArcView Apr, ama sida ...
Waxaan la sameynayo qarsoon, Laakiinse jidka midkood, oo ka tagay koox ka mid ah dadka sigaarka cabba aan raba dabcan gvSIG sidaa daraadeed waa inaan toddobaadkii si ay u bartaan si ay u isticmaalaan iyo bilaabaan umeerin toddobaad 2 waqti habeennimo ah ayaan ii qaadi doonaa. Sidoo kale boostadani waxaan ku bilaabi doonaa qayb ka mid ah kooxdayda ...
Boston GIS ayaa daabacay barbardhigga u dhexeeya qalabka maaraynta xogta aan ollogga: SQL Server 2008 astaanta, PostgreSQL / PostGIS 1.3-1.4, 5-6 MySQL xiiso leh, in kala cayncayn ah waxaa ku xusan sida kale laysku halayn karo ... in fiican markaas in in ka badan hal sanno ka hor ayaan ku dhuftay ubax sugaya caankiina si ay u koraan. Inkastoo Manifold uusan ku socon ...
Doorashada codsiga GIS
Halkan waa jaantuska siminaarka ugu dambeeyay ee aan siiyey (lacag la'aan) koox dad ah oo leh rabitaan wanaagsan laakiin aan lahayn lacag lagu maalgeli karo. Mowduucyada aynu ka wada hadalnay iyo kuwa ku fiicnaa, waxa ay ahayd inta ay ku kacayso in la sameeyo iyada oo la adeegsanayo goobo kala duwan. Waxaan sidoo kale ka hadalnaa faa'iidooyinka iyo khasaarihii codsiyadan iyo qaar ka mid ah ...
AutoDesk Bentley Systems ESRI GIS kala cayncayn ah SHP
Mudo intee le'eg ayaa feylka qaabka noolaanaya?
Muddo yar ayaan u maleynaayey in qaabka loo yaqaan 'axf' uu ahaa bedelka faylka ESRI; laakiin waxay u dhaqantaa sida geodatabase-ga ah ee ArcPad, taas oo tusinaysa in ESRI ay ku adkeysanayso inaynu ku xanuunsano qaabka shp. Dhibaatada Dhibaatooyinka qaabka shp ayaa ah taariikhdii hore, marka ay dukaankeeda ku kaydiso xogta xogta ...
1: Xaashiyaha 50,000 waxaa si fiican loogu yaqaanaa sawirada wadamo badan, markii hore waxaa la dhisay Datum NAD27 ee Mareykanka. Xaaladdan oo kale ayaan ku soo saaray WGS84; Waa qalad in la aamino in aad bedeli karto saadaalinta kaliya adigoo u wareegaya qaybo sida dadku u sameeyaan gobollo yaryar. Haddii aad xasuusto, ka hor intaanay korin ...
Cartografia, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Muuqaal Caalami ah ... maaha wax xun
Ka mid ah xalal badan oo ay maamulaan maalin walba ee maamulka GIS, Global Mapper barbaro dareenka leh qaar ka mid ah in loo sameeyo kala jiidasho leh oo uu soo caan loo qaybiyey by USGS sida dlgv32 Pro Echésmosle eegno. 1. Global Mapper - Ku xiridda adeegyada Xogtan u muuqataa ugu soo jiidashada badan, sababtoo ah ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg GPS KML My aragti ugu horeysay SHP
Kuwa aan garanayn, NASA waxay leedahay boggeeda Google Earth, leh awood aad u xiiso badan iyo ruqsad bilaash ah. On Yahoo! Jawaabaha, qaar ka mid ah arxan-darrada ayaa ku weydiin doona haddii sawirada Google Earth ay ku nool yihiin, iyo jawaab kale oo jaahil ah oo maya, laakiin in version Pro. Hehe, kan ugu xun ee kiiska ...